Ibhotwe laseWee Garden - I-Airbnb
Ibhotwe laseWee Garden
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguSharon
Phumla kule ndawo ithuleyo, entle, ekufutshane neziko laseBelfast, iWee Garden Palace yindawo entle yokubuka iBelfast kunye namaphandle asemaphandleni. Kwimizuzu elishumi elinesihlanu ngezithuthi zikawonke-wonke, uza kuzifumana embindini wedolophu kunye neevenkile zokutyela, iindawo zemidlalo yeqonga, ii-cinemas kunye neendawo zomculo. Iflethi eseMntla weSixeko, iflethi okanye indlu ekwicomplex ikwicomplex, ikwicomplex, ikwicomplex, ikwicomplex, ikwicomplex, ikwicomplex, ibekwe ezantsi kwe
'IWee Garden Palace' yiflethi okanye indlu ekwicomplex esandul 'ukuvuselelwa neflethi okanye indlu ekwicomplex, edibene nekhaya elikhulu kunawo onke losapho. Ijikelezwe ziigadi nendawo yokuhlala enamagqabi esixeko, yindawo entle onokuhlala kuyo. Kukho igumbi lokulala elinye elinebhedi elala abantu ababini, indawo yokugcina izinto negumbi lokuhlambela elinomnyango ophumela ngaphandle. Enye iflethi okanye indlu ekwicomplex yindawo enkulu evulekileyo yokuhlala. Xa ungena kule ndawo uza kufumana ikhitshi elinazo zonke izinto ezisisiseko, indawo encinci yokutyela nendawo yokuhlala etofotofo enethivi. Kukho ibhedi eyisofa kwindawo yokuhlala enokutshintshwa ibe yibhedi elala abantu ababini.
Indawo yokuhlala ethe cwaka, kufutshane neyona ndlela iphambili yokungena eBelfast. Kufuphi neepaki zasekuhlaleni, kuquka ukuhambahamba eCave Hill Country Park kunye namabala eBelfast Castle. Iivenkile ezahlukahlukeneyo ezikufutshane zazo zonke izinto eziyimfuneko neebhari, iivenkile zokutyela neevenkile zokutya onokuya kuzo ngeenyawo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Belfast